मानव संसाधन व्यवस्थापक पुरस्कार जोशीलाई | गृहपृष्ठ
Home बजार मानव संसाधन व्यवस्थापक पुरस्कार जोशीलाई
मानव संसाधन व्यवस्थापक पुरस्कार जोशीलाई
फागुन १२ , काठमाडौं (अस)। यस वर्षको उत्कृष्ट मानव संसाधान व्यवस्थापक पुरस्कार २०१० एभरेष्ट बैङ्कका मानव संसाधन व्यवस्थापक कुमार जोशीलाई प्रदान गरिएको छ । जोशी ५ वर्षदेखि एभरेष्ट बैङ्कमा मानव संसाधन व्यवस्थापकका रूपमा कार्यरत छन् । नेपाल व्यवस्थापक सङ्घका अध्यक्ष जनक शाह र गत वर्षमा मानव संसाधान व्यवस्थापक पुरस्कार २००९ का विजेता निता रानाले जोशीलाई बिहीवार संयुक्त रूपमा सो पुरस्कार प्रदान गरे ।
उक्त पुरस्कार ग्रोथ सेलर्स कन्सल्टेन्सी प्रालिले आयोजना गरेको ‘एचआर मीट’ को चौथो संस्करण ‘एचआर मीट २०११’ को अवसरमा प्रदान गरिएको हो । कम्पनीले ४ वर्षदेखि ‘एचआर मीट २०११’ गर्दै आएको छ । काठमाडौमा बिहीवार सम्पन्न सम्मेलनमा एनजीओ, आईएनजीओ, कर्पोरेट तथा वित्तीय क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यवस्थापकीय तहमा आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्न चाहने करीब २ सय जनाको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रमका स्रोत व्यक्तिका रूपमा विश्व मानव संशाधन कङ्ग्रेसका सल्लाहकार भारतका सञ्जय मुथुलले परिवर्तित विश्वमा मानव संसाधनको महत्त्वको विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । त्यस्तै अमेरिकाका बेरी मेहरको अनलाइन प्रस्तुति, रिलायन्स इण्टरटेनमेण्ट ग्रूपकी अध्यक्ष सागरिका घोषलगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा आध्यात्मिक सिकाइका विज्ञ एलपी भानु शर्माको प्रस्तुति पनि रहेको थियो । सो अवसरमा बोल्दै प्रमुख अतिथि महावीर पुनले नेपालजस्तो देशका हरेक क्षेत्र तथा संस्थाहरूमा मानव संसाधानको व्यवस्थापन आवश्यक बताए । उनले मानवहरूलाई मिलाउनु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम भएको उल्लेख गर्दै प्रविधि र मानव मिलाएर जान सके मात्र मुलुकको विकास हुने उल्लेख गरे ।
आयोजक संस्था ग्रोथ सेलर्स कन्सल्टेन्सी प्रालिका अध्यक्ष मोहन ओझाले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरूलाई एक ठाउँमा भेला गराएर मानव संसाधनको क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका गतिविधिका बारेमा जानकारी दिनु सम्मेलनको उद्देश्य भएको उल्लेख गरे । उनले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लागू गर्नका लागि आवश्यक ‘आइडिया जेनेरेट’ गर्नु कार्यशालाको प्रमुख उद्देश्य रहेको जानकारी दिए । यसपटकको सम्मेलनमा भारत तथा जर्मन नागरिकसमेतको सहभागिता थियो । कार्यक्रमलाई शैक्षिक स्वरूप दिने क्रममा सहभागी मध्येबाट ३ उत्कृष्ट कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।
घर जग्गा मेला हेर्न आउने बढे
फागुन १२ , चितवन (अस)। चितवनको रत्ननगरमा जारी पर्यटन वर्ष तथा राष्ट्रिय घर जग्गा मेला २०११ मा अवलोकनकर्ताको सहभागिता बढ्दो क्रममा छ । फागुन ६ गतेबाट शुरू भएको मेलामा हरेक दिन राष्ट्रियस्तरका कलाकारहरूको प्रस्तुति रहने गरेको छ । १६ गतेसम्म चल्ने मेलामा घर जग्गाको कारोबारमा पनि उत्साहजन वृद्धि भइरहेको आयोजक नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी सङ्घले जानकारी दिएको छ । मेला स्थलमा रहेका हाउजिङ अपार्टमेण्टका स्टलमा अवलोकनकर्ताको विशेष रुचि पाइएको छ । मेलामा सर्वसाधारण मात्र नभई चितवन तथा बाहिरी जिल्लाका व्यवसायीहरू पनि आवश्यक जानकारी लिनका लागि आएको मेलाका संयोजक दिनेश चुकेले जानकारी दिए । चितवनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित आवास क्षेत्रका रूपमा परिचित गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको मेलामा चितवन, काठमाडौंलगायत अन्य विभिन्न जिल्लाका हाउजिङ अपार्टमेण्ट तथा जग्गा व्यवसायीका स्टलहरू छन् ।
पर्यटन वर्षलाई समेत लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको यस मेलाले पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि सहयोग पुर्‍याएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । मेलासँगै भएको प्रचारप्रसारले आसपासमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाहय पर्यटकहरूको चहलपहल बढेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ रत्ननगरका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए ।
पछिल्ला दिनमा आयोजकहरूले व्यवसायीको परिवारलाई नजिकको पर्यटकीय स्थलहरूमा पुर्‍याउन थालेका छन् । ‘प्रचारकै अभावमा ओझेलमा परेका पूर्वी चितवनको टिकौली ताल, चेपाङ ताल, जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, अखेटोपहार भण्डारण केन्द्रहरूमा व्यवसायीका परिवारलाई पठाएका छौं, प्याकेजको कार्यक्रम अन्तर्गत पनि त्यस क्षेत्रमा पर्यटक पठाएका छौं,’ मेला संयोजक चुकेले भने, ‘विस्तारै यस क्षेत्रको प्रचार हुने अपेक्षा छ ।’ मेलामा आएका कलाकारहरूलाई पनि एकपटक ती क्षेत्रमा पुर्‍याएको चुकेले बताए । कलाकारले आफ्ना सृजनामा ती क्षेत्रका विशेषतालाई पनि राखुन् भन्ने उद्देश्यले सबै कलाकारहरूलाई त्यहाँ पुर्‍याएको उनले जानकारी दिए ।
मेलामा बुधवार लोक गायक मिलन लामा, पुरुषोत्तम न्यौपाने, मनोज न्यौपानेलगायतको प्रस्तुति थियो भने बिहीवार गायिका नलिना चित्रकार र पुरुषोत्तम न्यौपानेको प्रस्तुति रहेको आयोजकले जानकारी दिए । मेला स्थलमा राखिएको बाल उद्यान र मिनी जूले पनि अवलोकनकर्ताको ध्यान तानेको छ । मेलामा शुक्रवार भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरको प्रदर्शनी गरिनेछ भने भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचनाका विषयमा गोष्ठीसमेत हुँदैछ । यसअघि चितवनमा नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावना र चुनौती तथा भू उपयोगसम्बन्धी गोष्ठी सम्पन्न भइसकेका छन् ।
वेष्टार रेसिडेन्सीको विक्री खुला
फागुन १२ , काठमाडौं (अस) । संयुक्त अरब इमिरेट्स दुबईको प्राविधिक सहकार्यमा गोल्यान समूहद्वारा प्रवर्द्धित वेष्टार रेसिडेन्सीले अपार्टमेण्टको विक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले हाल ललितपुरको बालकुमारीमा निर्माणाधीन ४ ओटा भवन मध्ये एउटा भवनको संरचना पूरा गरेको जानकारी गराएको छ । सन् २०१२ सम्ममा निर्माण पूरा हुने यो अपार्टमेण्टको शुक्रवारदेखि आइतवारसम्म विशेष सहुलियतसहित कम्पनीले बुकिङ खुला गरेको हो ।
चक्रपथबाट केही मिटरभित्र १६ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको यो अपार्टमेण्टमा जम्मा २ सय २५ ओटा फ्ल्याट रहनेछन् । अहिले निर्माण पूरा भएको भवनमा ५ सयदेखि १ हजार ५ सय ७० वर्गफिटसम्मका ४४ ओटा फ्ल्याट रहेका छन् । १ बेडरूमदेखि ३ बेडरूमसम्म रहेका यी फ्ल्याटको मूल्य रू. ३५ लाखदेखि ९० लाखसम्म पर्ने गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवन गोल्यानले जानकारी दिए ।
सन् २०१२ सम्ममा सम्पूर्ण निर्माण पूरा भइसक्ने यी अपार्टमेण्टमा ब्याङ्केट हल, टेरेस पार्टी गार्डेन, स्वीमिङ पुल, जिम हल, मेडिकल हल, केटाकेटीका लागि खेल्ने स्थानलयगात विविध सुविधा उपलब्ध छन् । वास्तुशास्त्रमा आधारित भई निर्माण गरिएका यी भवन भूकम्पीय दृष्टिकोणले पनि सुरक्षित रहेको कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले निर्माणमा कायम गरेको गुणस्तरीयताका लागि अष्ट्रेलियाको इण्टरनेशनल सर्टिफिकेशन नेटवर्कबाट आईएसओ ९००१:२००८ समेत प्राप्त गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले यी अपार्टमेण्टको निर्माणमा जग्गासहित रू. १ अर्ब २० करोड खर्च हुने अनुमान रहेको बताएको छ । गोल्यान समूहले पहिलोपटक निर्माण गर्न लागेको यो अपार्टमेण्टसँगै काठमाडौंको सोल्टीमोडमा पनि ‘वेष्टर स्काइ लिभिङ’ नामक अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न अपार्टमेण्ट निर्माण गरिरहेको बताएको छ । यस अपार्टमेण्टमा अहिलेसम्म नेपालमा बनेका अपार्टमेण्टमध्ये सबैभन्दा धेरै सुविधा प्रदान गरिने कम्पनीले दाबी गरेको छ । यसको मूल्य प्रतिवर्गफिट १ हजार १ सयदेखि १ हजार ३ सयसम्म पर्ने बताइएको छ ।
टेलिकमको काउण्टर कपनमा
फागुन १२ , काठमाडौं (अस) । नेपाल टेलिकमले कपनमा नगद सङ्कलन काउण्टर सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले चाबहिल शाखाअन्तर्गत कपन एक्सचेञ्जबाट टेलिफोन, एडीएसएल वितरण तथा मर्मतलगायत सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । टेलिकमले बिल भुक्तानीसहित सेल्ससम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराइने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कपन एक्सचेञ्जको स्वीचिङ क्षमता ६ हजार रहेको छ । टेलिकमले यस कार्यालयबाट निकट भविष्यमा सिम, रिम वितरण तथा परिवर्तनलगायत जीएसएम तथा सीडीएमए मोबाइल सेवाको महशुल काउण्टरसमेत सञ्चालनमा ल्याउने बताएको छ । यसैबीच टेलिकमले काठमाडौं क्षेत्रीय निर्देशनालय अन्तर्गतका लेखा कार्यालयका काउण्टरहरूबाट महशुल सङ्कलन गर्ने समय थप गरेको छ । अब १० बजेदेखि ४ बजेसम्म काउण्टर सञ्चालन हुने टेलिकमले जानकारी दिएको छ । यसअघि काउण्टर समय १० बजेदेखि ३ बजेसम्म रहेको थियो । हाल चाबहिल, अल्फाविटा बानेश्वर, माइतीघर, नक्साल, गोङ्गबु, भद्रकाली र पाटनका काउण्टरहरू भने बिहान ९ बजेदेखि नै सञ्चालनमा छन् । यसैगरी कम्पनीले ग्राहकहरूको सुविधाका लागि विभिन्न बैङ्कमार्फ महशुल भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिरहेकोमा महशुल भूक्तानी गरेको ३ घण्टाभित्र लेखा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताएको छ । यसबाट ग्राहकहरूलाई थप सुविधा पुग्ने टेलिकमको अपेक्षा छ ।
वैद्यद्वारा उम्मेदवारीको औपचारिक घोषणा
वैद्य अर्गनाइजेशन अफ इण्डिष्ट्रिज एण्ड ट्रेडिङ हाउस (भोइथ)का अध्यक्ष एवम् उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरज वैद्यले महासङ्घको चुनावका लागि औपचारिक रूपमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । ‘प्रगतिको विश्वास सम्वृद्धिको उदय’ भन्ने नाराका साथ वैद्यले बिहीवार धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सो उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । नेउवा महासङ्को आगामी चैत २९ गते नयाँ कार्य समितिका लागि चुनाव हुँदै छ ।
सूदुरपश्चिमका उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गर्दै उनले सबल नेतृत्वले आर्थिक विकासको बाटो खोल्ने बताए । शान्ति र स्थिरता नआएसम्म मुलुकको आर्थिक उन्नति सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि उद्योगी व्यवसायीको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । सूदुरपश्चिमलाई बेवास्ता गरेर नेपालको उन्नति हुन नसक्ने धारणा उनले सो अवसरमा व्यक्त गरे । सङ्घको संरचनागत परिवर्तन आवश्यक भएको औंल्याउँदै उनले सक्रिय नेतृत्वले विकेन्द्रकरणलाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने बताए । आफूले नेतृत्व पाएमा सङ्घलाई राष्ट्रिय एवम् अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी संस्थाका रूपमा अघि बढाउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । वैद्य २५ वर्षदेखि नेउवामहासङ्घमा सक्रिय रूपमा संलग्न रहँदै आएका छन् ।
कोरियाली विशेष टोली काठमाडौंमा
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिका विशेष दूत एवम् सहायक अर्थमन्त्री लियोङ पाक तथा कोरिया चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिहरूको टोली बिहीवार काठमाडौं आइपुगेको छ । अपरान्ह सोल्टी क्राउन पुगेको सो टोलीलाई सोल्टी क्राउन प्लाजामा विशेष स्वागत गरिएको थियो । सो टोलीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको सहकार्यमा शुक्रवार उद्घाटन हुन लागेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको कार्यक्रममा कोरियाली राष्ट्रपतिद्वारा पठाइएको विशेष सन्देश दिने कार्यक्रम छ ।
गभर्नर डा. खतिवडा कोलम्बो प्रस्थान
श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा फागुन १३ र १४ गते आयोजना हुने सिसन बोर्ड अफ गभर्नर्सको ३० औं बैठकमा भाग लिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा युवराज खतिवडा बिहीवार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । ४६औं सिसन गभर्नर्स सम्मेलनमा उनी सहभागी हुनेछन् । बैठकमा सिसन सदस्य तथा पर्यवेक्षक केन्द्रीय बैङ्कहरूका साझा आर्थिक तथा वित्तीय मुद्दामा छलफल तथा विचार आदनप्रदान गरिने कार्यक्रम छ । कार्यक्रममा विश्व आर्थिक परिदृश्य तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय अवस्थाका बारेमा पनि छलफल गरिनेछ । बैठकले सिसन सेण्टरद्वारा आगामी वर्षसञ्चालन गरिने अनुसन्धान तथा तालीम कार्यक्रम अनुमोदन गर्ने, बजेट स्वीकृत गर्ने र सदस्य केन्द्रीय बैङ्कहरूबीच सहयोग आदनप्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ । कन्फरेन्समा लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सका प्रोफेसर डा. चार्ल्स गुडहार्टलगायत विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । डा. गुडहार्टको कार्यपत्रमाथि गभर्नर डा. खतिवडाले टिप्पणी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनी यही फागुन १६ गते काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम छ ।
मलेसियाको क्वालालम्पुरमा अवस्थित सिसन सेण्टर आर्थिक विषयको अनुसन्धान तथा केन्द्रीय बैङ्किङसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकका केन्द्रीय बैङ्कहरूको क्षेत्रीय सङ्गठन हो । यसै वर्ष चीनले सदस्यता लिएपछि सिसन सेण्टरको सदस्य सङ्ख्या १७ पुगेको छ । सार्क मुलुकहरूमध्ये नेपाल र श्रीलङ्का मात्र सिसन सेण्टरका सदस्य हुन् ।
शिखरका नयाँ जुत्ता बजारमा
शिखर शूले नयाँ डिजाइनका स्पोर्ट जुत्ता बजारमा ल्याएको छ । सम्पूर्ण तहका उपभोक्ताहरूलाई उपयुक्त हुने यी जुत्ताको मुल्य रू. ९ सय ९९ रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । विशिष्ट मोडेल, आकर्षक रङ र उचित मूल्यमा आएको यो जुत्ता मनमोहक र लगाउँदा सजिलो भएकाले यसलाई उपभोक्ताहरूले मन पराउने कम्पनीको दाबी छ । यी जुत्ता खेलकूदका पारखी तथा मर्निङ वाक गर्नेहरूका लागि पनि उपयोगी रहेको कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीले सिजनअनुसारका चप्पल र जुत्ताहरू पनि अब छिट्टै बजारमा ल्याउनेसमेत बताएको छ ।
‘केआरएस सोलुसन्स’ भ्युसोनिकको आधिकारिक विक्रेता
डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन, एलसीडीलगायत सामानहरूको उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी भ्युसोनिक कर्पोरेशनले ‘केआरएस सोलुसन्स प्रालि’ लाई नेपालका लागि आधिकारिक वितरक तोकेको छ । केआरएसले नेपालभर भ्युसोनिकका उत्पादनहरू विक्री गर्न जिल इण्टरप्राइजेजलाई आधिकारिक डिलर नियुक्त गरेको बताएको छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको वालनटमा मुख्य कार्यालय रहेको भ्युसोनिकको उत्पादन विश्वव्यापी रूपमा विक्री हुँदै आएका छन् । यसले वार्षिक १ अर्ब डलरबराबरका सामग्रीहरू विक्री गर्दै आएको छ ।
कम्पनलीले कम ऊर्जा खपत गर्ने उत्पादनहरू नेपाली बजारमा ल्याएको बताएको छ । हाल कम्पनीले ई-पोष्टरसमेत बजारमा ल्याएको बताएको छ । भ्युसोनिका उत्पादनमा लेड स्क्रीन अल्ट्रा लो भोल्टेज (यूएलभी) भएकाले कम विद्युत् खपत हुने कम्पनीको दाबी छ । भ्युसोनिकको भ्युवुक ल्यापटप ऊर्जा खपत र प्रयोगका हिसावले सजिलो र उपयोगी रहेको कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीका अनुसार यसमा लेड ब्याक लिट स्क्रीनमा इमेज क्वालिटी राम्रो हुनुका साथै पढ्नसमेत सजिलो हुन्छ । पारो (मर्करी) नभएको लेड ब्याकलाइट प्रविधिमा थोरै ऊर्जा भए पुग्दछ । आईएसओ १४००१ बाट प्रमाणित यो कम्पनी मुख्य कार्यालयमा विण्ड सोलार, सानो जलविद्युत् आयोजना र जियोथर्मललगायत माध्यमबाट ऊर्जा प्राप्त गर्दछ । भ्युसोनिकका ल्यापटप एकपल्ट चार्ज गरेपछि १२ घण्टा काम गर्ने नौओटा सेलरहेको ली-लोन ब्याट्री उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसमा प्रयोग भएका प्लाष्टिकहरूको अवधि समाप्त भएपछि पुनःप्रशोधन गर्न सकिन्छ ।
अब नेपालमा पनि छाँगारोहण
साहसिक पर्यटनका क्षेत्रमा विश्वमै लोकप्रिय मानिएको छाँगारोहण (क्यानोनिङ) अब नेपालमा पनि गरिने भएको छ । पर्यटन वर्ष२०११ को अवसर पारेर नेपाल क्यानोनिङ एशोसिएशनले अन्तरराष्ट्रिय क्यानोनिङ रन्देभु २०११ गर्न लागेको हो । एशियामै पहिलोपटक यसप्रकारको कार्यक्रम हुन लागेको आयोजकले बताएको छ । आगामी अप्रिल ७ देखि १३ सम्म लमजुङको मर्स्याङ्दी आसपासमा रहेका छहराहरूमा यो कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । सो अवसरमा क्यानोनिङको तालीम लिएका करीब २ सय जना क्यानोनरहरूको सहभागिता हुनेछ । त्यसमध्ये नेपालबाट २५ जनाको सहभागिता हुने आयोजकले जानकारी दिएका छन् । यो कार्यक्रमले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने र साहसिक पर्यटनको नयाँ सम्भाव्यतालाई पहिल्याउने हुँदा नेपाल पर्यटन बोर्डलगायत अन्य निकायले आवश्यक सहयोग गर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रचण्डमान श्रेष्ठले बताए ।
‘गोष्ठीले अन्य देशको आर्थिक विकासका विधिबारे जानकारी दिने अपेक्षा छ’
– प्राडा देवराज अधिकारी
अध्यक्ष, नेपाल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान
यही फागुन २६ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौंमा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना हुँदै छ । नेपाल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान र काठमाडौं फ्रण्टिएर एशोसिएशन (केएफए) स्कूल अफ बिजनेश म्यानेजमेण्टको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको सो गोष्ठीमा विश्वका ३० भन्दा बढी देशका १ सयभन्दा बढी विद्वान् प्राध्यापक, लेखक तथा व्यवस्थापनविज्ञहरू सहभागी हुँदैछन् । गोष्ठीमा उनीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । गोष्ठीको सेरोफेरोमा रहेर नेपाल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको मुख्य सारः
गोष्ठीको मुख्य उद्देश्य के हो ?
नेपाल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले नियमित रूपमा व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गर्दै आएको छ । तर, यसपटक हुन लागेको गोष्ठी अन्तरराष्ट्रियस्तरको हो र पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको हो । गोष्ठीमा अन्तरराष्ट्रियस्तरका व्यवस्थापन विज्ञहरूबाट सयभन्दा बढी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । गोष्ठीमा २ सयभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी हुने हाम्रो अनुमान छ । विश्वको आर्थिक तथा व्यवस्थापन क्षेत्रको वास्तविक स्थिति थाहा पाउन गोष्ठी महत्त्वपूर्ण माध्यम हुने पनि हाम्रो विश्वास रहेको छ । गोष्ठीको उद्देश्य अन्य देशहरूको आर्थिक विकासको विधि (मोडालिटी) पत्ता लगाई नेपालमा पनि त्यसलाई अवलम्बन गर्ने तरीका खोज्नु पनि हो ।
गोष्ठीमा कस्ता-कस्ता व्यक्ति सहभागी हुँदै छन् ?
गोष्ठीमा विश्वका ३० भन्दा बढी देशका १ सयभन्दा बढी विद्वान प्राध्यापक, लेखक तथा व्यवस्थापन विज्ञको सहभागिता हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । उनीहरू सबै आ-आफ्ना क्षेत्रका प्राज्ञ एवम् अनुभवी व्यक्तित्वहरू हुन् । उनीहरूले विभिन्न विषयहरूमा आ-आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्ने छन् ।
गोष्ठीका मुख्य विशेषताहरू के-के हुन् ?
कार्यक्रममा सहभागीहरूले संस्थागत नेतृत्व तथा परिवर्तन, ज्ञान व्यवस्थापन, संस्थागत उत्तरदायित्व, रणनीतिक व्यवस्थापन उद्यमशीलता, मानव संशाधन व्यवस्थापन, व्यवस्थापन शिक्षा, वर्तमान विश्वको आर्थिक सङ्कटलगायत विषयहरूमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै छन् । कार्यक्रमको पहिलो खण्ड नै तीन चरणको हुनेछ । दोस्रो खण्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) मञ्च, उद्यमी मञ्च, व्यवस्थापकीय मञ्च र अन्तरराष्ट्रिय लेखक मञ्चहरूको छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । चारओटै अन्तरक्रियाको नेतृत्व सम्बन्धित क्षेत्रका अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरूले गर्नेछन् ।
गोष्ठीबाट कस्तो उपलब्धिको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
गोष्ठीबाट नेपालका विश्वविद्यालय र कलेजमा कार्यरत प्राध्यापकहरूले समेत अन्तरराष्ट्रिय प्राज्ञहरूसँग अन्तरक्रियामा सहभागी हुने मौका पाउनेछन् । कार्यक्रमले व्यवस्थापन क्षेत्रमा ज्ञानको आदनप्रदानका साथै प्राज्ञिक पर्यटनलाई पनि प्रवर्द्धन गर्नेछ । यसबाट नेपाल विश्वकै प्राज्ञिक पर्यटनको थलोको रूपमा विकास हुने सम्भावना पनि रहेको छ । यसका आधारमा गोष्ठीबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हासिल हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।